हिमालयन बैंकको ऋणपत्रमा भोलि पनि खरिद आवेदन दिन पाइने Bizshala -
सेञ्चुरी बैंकको स्वतन्त्र संचालकमा प्रा.डा. गीता प्रधान
जाजरकोटको विद्यालयलाई सिटिजन्स बैंकको रु.१ लाख सहयोग
हिमालयन बैंकको ऋणपत्रमा भोलि पनि खरिद आवेदन दिन पाइने
काठमाण्डौ । हिमालयन बैंक लिमिटेडले ऋणपत्रको निष्कासन तथा बिक्री खुला अवधि एक दिन थप गरेको छ । अब लगानीकर्ताले भोलि भदौ २ गतेसम्म ऋणपत्र खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बैंकले गत साउन २ गतदेखि रु. ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रका इकाई निश्कासन गरेको थियो । बैंकले १०० रुपैयाँ मूल्यका ३० लाख इकाई ऋणपत्र बिक्री खुला गरेको हो । ऋणपत्र खरिदका लागि छिटोमा साउन ६ गते र ढिलोमा भदौ १ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने भनिएको थियो ।
बैंकले ‘हिमालयन बैंक लिमिटेड बण्ड २०८३’ नामको ऋणपत्रका १ हजार दरका ३० लाख युनिट जारी गरेको हो । ऋणपत्रको कुल युनिटमध्ये ४०% अर्थात एक अर्ब २० करोडबराबरको १२ लाख युनिट सर्वसाधारणलाई र बाँकी ६०% अर्थात एक अर्ब ८० करोड बराबरको १८ लाख युनिट ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई ब्यक्तिगत तवरबाट बिक्री खुला गरिएको छ ।
बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्नेहरुले वार्षिक १०%को हिसाबले ब्याज पाउनेछन् । ब्याजको भुक्तानी भने अर्धवार्षिक रुपमा हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकले ७ वर्षे अवधिको ऋणपत्र निश्कासन गरेको हो ।
यसअघि बैंकले ७ बर्षे अवधिको 'हिमालयन बैंक लिमिटेड बण्ड-२०७७' जारी गरेको थियो । बैंकले उक्त ऋणपत्रमा आठ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइएको थियो ।
ऋणपत्र निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल लिमीटेड रहेको छ ।
himalayan bank limited debenture
धनुषाधाममा एनआइसी एशियाको शाखा
लगानीकर्ता बैंकमा सर्दै, नयाँ/पुरानाको बजारमा अचाक्ली भीड
ब्रोकरैपिच्छे केवाइसी भर्नुपर्ने झञ्झट अन्त गर्दै सिडिएसी
पुनर्बिमा कम्पनीलाई रु. १.६ अर्बको आइपीओ निश्कासन अनुमति
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमीटेडलाई रु. ३३.९८ करोड आइपीओ निश्कासनको अनुमति
काठमाण्डौ । केही दिनदेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको नेप्से इन्डेक्स...
काठमाण्डौ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड(सिडिएससी)ले निकट समयमा नै...
काठमाण्डौ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ...
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमीटेडलाई रु. ३३.९८
काठमाण्डौ । जलविद्युत आयोजना तथा कतिपय प्राथमिकताप्राप्त...
दुई कम्पनीका झन्डै दुई करोड कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा मंगलबार दुई कम्पनीका...
नेप्सेमा ‘१०% लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर–२०८६’ सूचीकृत
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकको ‘१०% लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर–२०८६’ का...
कालिका लघुवित्तको कारोबार आजबाट खुल्यो, कारोबार संकेत र ओपनिङ
काठमाण्डौ । दोस्रो बजारमा आज मंगलबारदेखि कालिका लघुवित्त वित्तीय...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले अवितरित हकप्रद लिलामीमा
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले...